Wararka - Wuxuu ku guuleystay kii ugu horreeyay "2018 Kantaroolaha Alaarmiga Gaaska Shiinaha ee Tobanka nooc ee ugu sarreeya liiska qiimeynta guud"
2018 Kantaroolaha Gas Gas ee Shiinaha ee Tobanka Xul ee ugu sarreeya ayaa ah midka ugu dhammaystiran uguna weyn uguna baaxadda weyn uguna weyn waxqabadka qiimeynta xoogga dhameystiran ee ay martigeliso Shabakadda Ranking Network. Doorashadan, tobanaan kun oo shabaqeeye ayaa codeeyay oo faallo ka bixiyay.Dhowr wareeg oo dib u eegis ah ka dib, tobanka nooc ee ugu sareeya ee tayada sare leh iyo caanka ah ayaa la doortay.Shabakadda Ranking Network waxaa ka go'an in ay kor u qaaddo calaamadaynta hababka isticmaalka Shiinaha, dhisto jawi wanaagsan oo macaamiisha ah. Tan iyo markii la aasaasay dhacdada, jawaabtu waxay ahayd mid xamaasad leh. , Soo jiidashada ma aha oo kaliya ka qaybgalka ku dhawaad ​​kala badh ka mid ah noocyada gudaha iyo qaybiyeyaasha, laakiin sidoo kale in ay aad uga walaacsan yihiin in ka badan 70 warbaahinta online si fiican loo yaqaan sida Sina, Netease, Xinhua, Shiinaha, Sohu, iyo wadaaga diyaafadda brand. Warbaahinada waaweyni waxay siisaa fursad loogu talagalay noocyada ugu wanaagsan ee gudaha si ay u ururiyaan caannimada una wanaajiyaan wacyiga sumadda iyo saamaynta.
Bandhiga Cippe 2019 waa kulan joogto ah oo ka mid ah warshadaha batroolka iyo batroolka caalamiga ah. Iyada oo leh aagga bandhigga ee 90,000 mitir oo laba jibbaaran, waxay soo jiidatay ku dhawaad ​​​​1,800 shirkadood oo ka kala yimid wadamada 65 iyo gobollada adduunka oo dhan. Tirada booqdayaasha bandhigga ayaa dhaaftay 120,000.Khubarada warshadaha iyo wakiilo ganacsi oo ka kala yimid dalka iyo dibadda ayaa isu soo ururay si ay u helaan horumarinta warshadaha.Our ammaanka gaaska iyo dhufto ee adeegga smart ayaa soo jiitay dareenka warshadaha.
Wada-hawlgalayaashayada iyo macaamiisha cusub ee adduunka oo dhan waxay yimaadaan si ay noo booth oo ay leeyihiin wada sheekeysi qoto dheer si ay u helaan faham qoto dheer oo ku saabsan alaabta our la cusboonaysiiyay iyada oo loo marayo bandhig this.Our Product si fiican u qaabilay macaamiisha.In 2019, waxaan sii wadi doonaa in ay noqon 'macaamiisha- 'centric' si aan ugu dadaalno sidii aan qiimo weyn ugu samayn lahayn macaamiisheena.
qalabka gaaska go'an, lpg gaaska ogaanshaha, Shiine gaaska baadhe, Alaarmiga gaaska gubanaya, gaaska ololi kara, qalabka gaaska,